NCS ရှက်ဖီး - Element ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူအခြားလူအတွေ့အကြုံများ
Mafsud အဆိုပါ NCS အစီအစဉ်ကိုသူမ၏အပေါ်ရှိခဲ့ပါတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
"ငါသည်သင်းမှာအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်အသစ်သောလူတို့နှင့်အတူယုံကြည်မှုဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပါတယ်။ အဆိုပါရေလှုပ်ရှားမှုများ, ဒါဒါကြောက်စရာနှင့်အမှန်တကယ်စိန်ခေါ်ခဲ့ကြပေမယ့်အကြီးအရာယခုတွင်ငါသည်ငါ၏အစိုးရိမ်မှုတွေရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်တူသောငါခံစားမိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုသင်ခန်းစာတွေကိုရေကူးရမယ့်တာဖြစ်ပါတယ်။
NCS သင်သည်နောက်တဖန်လုပ်ဖို့ get ဘယ်တော့မှတစ်ခုခုပါပဲ။ ဒါဟာပျော်စရာင်နှငျ့သငျမိတျဆှမြေားစေမည် -! ကျောင်းမှာသင် NCS အပေါ်လုပ်ဖို့ get အကျင့်တို့ကိုကျင့်ကြကုန်အံ့ဘယ်တော့မှ "
"NCS အကြောင်းကိုအကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုငါကပိုကျွန်မသိတယ်ထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးနိုင်မရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ငါအစဉ်အမြဲငါ abseil နိုင်ပါလိမ့်မယ်ထင်ဘယ်တော့မှသော်လည်းငါ့အသင်း၏အားပေးမှုနှင့်ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ, ငါထိုသို့ပြုမှစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်တကယ်ပျော်မွေ့!
ငါမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်အများကြီးလုပ်ပြီးပြီနဲ့ကျွန်မလည်းအချို့သောအသိမိတ်ဆွေတွေကိုသိရန်အများကြီးပိုကောင်းရရှိပါသည်။ "NCS တကယ်သင်ယုံကြည်ကိုးစားမြှင့်တင်ရန်မနှင့်ပရိုဂရမ်၏လူမှုရေးအရေးယူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်များများအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်
Ahmed ကတစ်ဦး NCS ပါဝင်သူအဖြစ်သူ၏အတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
"ကျနော့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအခိုက်ကျိန်းသေကိုယ်ခံပညာသင်ယူခြင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာတစ်ဦးအနက်ရောင်ခါးပတ်ကြီးနှင့်သူကျွန်တော်တို့ကိုငါအစစ်အမှန်လောကရှိတကယ့်အသုံးဝငျကျွမ်းကျင်မှုသည်ထင်ရာ Self-ကာကွယ်ရေးသင်ပေးတယ်။ ကျနော်တို့ရေပေါ်မှာစဉ်ကျွန်တော်ဂိမ်းကစားခဲ့ကြသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လှေစီးနေသည်မှာလည်းဤမျှလောက်ပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒူလ် NCS အစီအစဉ်ကသူ့အတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
"ကျွန်မကျောင်းတွင်မိတ်ဆွေတစ်ဦးထံမှ NCS အကြောင်းကိုကြား၏။ ငါ့အဘို့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုငါတကယ်ရေအားကစားပျော်မွေ့သောကွောငျ့ kayaking ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအထွဋ်၏တကယ်ကြောက်တာပါဒါကြောင့်ငါတောင်တက်လုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲကြောင်းမယုံနိုငျပါသညျ! NCS တစ်လျှောက်လုံးကျွန်မရဲ့ကြောက်စိတ်ရင်ဆိုင်ရဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပါတယ်။
ငါတကယ်ကြီးမြတ်သောအရာ, မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်၏ဝန်ကိုဖန်ဆင်းပါတယ်။ NCS သင်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်ဖို့မရကြဘူးကြောင်းပစ္စည်းပစ္စယလုပ်ဖို့တခါ-in-a-တစ်သက်တာအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစသင့်အိပ်ရာအောင်နှင့်ကိုဖုနျစုနဲ့တူအတော်လေးလွတ်လပ်သောဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏ - ငါပုံမှန်အားဖြင့်အိမ်မှာကြောင်းအရာများကိုပြုပါဘယ်တော့မှ "!